DHMI 9 Inozivisa Mwedzi Wemifananidzo - RayHaber
mushaTURKEYCentral Anatolia Region06 AnkaraDHMİ 9 Inozivisa Mwedzi Wemifananidzo
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 Ankara, Central Anatolia Region, GENERAL, Airports, HIGHWAY, musoro wenyaya, TURKEY 0
dhmi inokwazisa manhamba emwedzi
General Directorate of State Airports Authority (DHMI), 2019 gore raSeptember ndege yendege, vafambi nehuwandu hwekutakura zvinhu zvakaziviswa.
Naizvozvo, munaSeptember; Nhamba yekubhururuka kwendege uye yekuenda kunhandare dzendege yaive 77.365 yendege dzekunze uye 75.465 yendege yenyika. Yakazara ndege inoshumirwa inosvika ku194.923 ine kudarika.
Muna September, Turkey kushumira mudzimba mutakurwi motokari panhandare dzendege mhiri 8.668.089, 12.240.602 akanga dzakawanda mutakurwi motokari. Wakazara mutyairi wevatyairi wakanangana nekufambisa wakazivikanwa se20.929.426.
Ndege dzinotakura zvinhu (ngoro, mail uye chikwama) traffic; Kubva munaGunyana, 81.084 matani mumitsetse yedzimba uye 244.718 matani mumitsetse yenyika dzese dzakasvika huwandu hwematani e325.802.
9 MONTHLY (JANUARY-SEPTEMBA) AIRCRAFT, PASIYA NOKUTADZESA DAMBUDZIKO
2019 sekupera kwaGunyana; kufambiswa kwendege kuenda uye kubva kunhandare yendege yaive 636.771 pamhepo nendege uye 554.646 panhandare dzenyika. Nekudaro, huwandu hwendege hwakazara hwasvika 1.550.588 nekupfuura.
Turkey 76.431.401 chenyaya hombe wechipfuwo mutakurwi motokari dzendege, apo dzakawanda mutakurwi motokari panguva iyi 84.828.052 yakananga dzaifanoiswa vanhu pamwe chete zvachose mutakurwi motokari akamira 161.482.868.
Ndege dzinotakura zvinhu (ngoro, mail uye chikwama) traffic; 626.460 matani mumitsetse yedzimba uye 1.865.412 matani mumitsetse yenyika.
Ndege inoenda uye ichienda kuIstanbul Airport munaSeptember yakava 9.369 mundege, 28.960 nendege dzepasi rose uye yakazara 38.329. Yese yakazara 1.483.994 yekufambisa traffic, inosanganisira 4.783.667 mumitsetse yemudzimba uye 6.267.661 mumitsetse yenyika dzakawanda, yakazoonekwa.
Munguva yaNdira -September 2019 ndege yendege yakazozivikanwa kuAtatürk Airport, uko zviitiko zvedzingezheni uye kutakura zvinhu zvinotakura zvinhu zvakaenderera mberi. PaAtatürk Airport, vafambi ve130.229 vakashumirwa nguva yaNdira-Kubvumbi kusvikira kuvhurwa kweIstanbul Airport.
Ndege ye222.435 ndege uye 35.574.890 yekufambisa yaienda kuIstanbul Airport mumwedzi mipfumbamwe. Saka, chete 352.664 ndege traffic uye 51.647.424 yekufambisa yaifambiswa yakawanikwa mune idzi mbiri ndege.
9 MONTHLY AIRCRAFT, PASIERER uye YOKUKADZIRA YEMAHARA YEMABHARA
Huwandu hwevatakuri vanoshandira ku9 pamwedzi vanopfuura mamirioni e47 munhandare dzekutandarira-uko kune ndege dzakawanda dzinorema. Passenger traffic 16.035.492 pamitsetse yemudzimba, 31.556.514 pamitsetse yenyika; kufambiswa kwemhepo yaive 121.877 pamhepo ndege dzekunze uye 184.790 pane ndege dzepasirose.
9 danho remwedzi nemwedzi renzvimbo dzinoona nhandare munzvimbo dzekushanya ndeizvi:
Izmir Adnan Menderes Airport yakawana 6.875.544 nendege, 2.686.942 ndege dzese uye yakazara ma9.562.486 vafambi.
PaAntalya Airport, vakapfuura 5.399.599 vafambi vakashumirwa, kusanganisira 23.929.236 mudzimba uye 29.328.835 yenyika dzakawanda.
MuMuğla Dalaman Airport, yakazara ye1.280.104 yavanofamba, kusanganisira 2.711.541 mundege uye 3.991.645 nendege dzepasi rose, zvakaonekwa.
Muğla Milas-Bodrum Airport ine huwandu hwevatakuri vepamusha 2.089.603 uye huwandu hwevatakuri vepasi rose 1.702.491. Vapfuura vese 3.792.094 vafambi vakashumirwa.
Huwandu hwevapfuuri vepamba pamwe nedzimwe nyika paGazipaşa Alanya Airport yaive 390.642. Chiverengero chaipfuura chavakasvika 526.304.
DHMI Inoshuma Vatengesi, Ndege uye Cargo Numeri munaFebruary 06 / 03 / 2019 Mukuru weGeneral Airports Authority (DHMI) akazivisa kufamba kwemhepo, vatengesi uye vatengesi veFebruary pa2019. Saizvozvo, muna February 2019; Airplane kufamba kwekutakura uye kutora kune zvikwata zvepasitadhi yaiva 60.198 mumiganhu yepamba uye 37.037 mumiganhu yenyika. Kuwedzera kwekufamba kwemigwagwa mumwedzi iwoyo kwakaonekwa seC33.253. Nokudaro, motokari dzese dzendege dzakashandiswa mumugwagwa wakaenda ku130.488 pamwe nekupfuura. Airports mhiri Turkey ichi mwedzi 7.618.937 mumhuri mutakurwi motokari, apo dzakawanda mutakurwi motokari yakanga 5.131.874. Saka, mumwedzi uri mubvunzo, birlikte
DHMI Inozivisa Chikunguru Maera 07 / 08 / 2019 General Directorate of State Airports Authority (DHMİ), 2019 gore raChikunguru, ndege yendege, vafambi uye nhamba dzekutakura zvinhu zvakaziviswa. Naizvozvo, 2019 muna Chikunguru; Ndege yekufambisa kuenda uye kubva kunhandare yendege yaive 79.311 pamhepo nendege uye 83.547 panhandare dzenyika. Kuwedzeredza mafambiro mumwedzi mumwe chete yaive 44.660. Nekudaro, iyo yakazara mweya yekushandira mumhepoway yakasvika iyo 207.518 nemopfuura. Airports mhiri Turkey ichi mwedzi 9.122.161 mumhuri mutakurwi motokari, apo dzakawanda mutakurwi motokari yakanga 12.897.411. Nekudaro, yakazara yevanotakura vanhu vane vanhu vanofamba nenzira yakananga mumwedzi unotaurwa ...
State Airports Authority General Manager Funda muna January, 'DHMİ Running Turkey Nendege' 29 / 01 / 2019 Verenga Ocak, Gweta Mukuru uye Sachigaro weBhodi yeHurumende Airports Authority, akapa ruzivo pamusoro pemishandiro anoenderera mberi mugove yaakaita kubva mubhuku rake re Twitter. Pano Mutungamiri Mukuru January anowirirana: Nyika yedu, hurumende yehurumende mumunda wekufambira mberi kukuru muEurope, kukurumidza kukurudzira muEurope, yakasvika pane imwe nyika munharaunda yevhurumende. Ikoko kwakanga kusina mubvunzo kuti mitemo yekufambisa yakagadzirirwa mugore rekupedzisira re17 yakanga yakabudirira mukutora iri kubudirira chati. Ini ndinogona kutaura kuti nyika yedu yakagadzirirwa zvikwata zvemazuva ano zvekare uye zvigaro zvisingasviki kune vayo vari munyika. DHMİ inonzi brand yepasi rose maererano nehutano uye hupfumi hwehupfumi hwehupfumi nemabasa makuru akaitwa Hay
Mukuru-Sen Hunger-Poverty Anozivisa Mwedzi weApril Mifananidzo 09 / 05 / 2017 Officer-Sen nenzara-urombo inozivisa April nhamba: Officer-Sen ose mwedzi kugara inoitwa "nokuda nenzara-urombo" tsvakurudzo, 4 vanhu nzara chikumbaridzozve kuti mhuri muTurkey 1.725,18 TL, kuti urombo mutsetse wakaiswa pa 4.715,65 TL. Officer-Sen muna April, maererano pakutsvakurudza nenzara-urombo inoitwa kugara mwedzi wose achishandisa Confederation 4 1.725,18 vanhu nzara chikumbaridzozve kuti mhuri muTurkey TL, kuti urombo mutsetse akanga akatsunga muzana 4.715,65. Maererano neimwe ongororo yakaitwa April zvichienzaniswa March aiva kuderera avhareji xnumx'luk muzana mitengo zvokudya. Kuwedzerwa kukuru munaEpril ndevamatekiti ane kuwedzera kwe artış
Mukuru-Sen Hunger-Urombo May May Anoshuma Numeri 08 / 06 / 2017 Officer-Sen nenzara-urombo inozivisa May Mwedzi Figures: Officer-Sen nokugara kuitwa ose mwedzi, "maererano nenzara-urombo" Dai pakutsvakurudza migumisiro romwedzi, 4 vanhu nzara chikumbaridzozve kuti mhuri muTurkey 1.696,35 TL, kuti urombo mutsetse wakaiswa pa 4.721,80 TL . Officer-Sen Confederation akabata kugara mwedzi wose achishandisa tsvakurudzo nenzara-urombo Maererano mhuri muTurkey muna May 4 1.696,35 £ nzara chikumbaridzo, kuti urombo mutsetse akanga akatsunga muzana 4.721,80. Maererano neongororo, mitengo yezvokudya yakaderedzwa ne1,67 inowanikwa muna May zvichifananidzwa naApril. Kuwedzerwa kukuru muna May kwaiva yüzde
DHMI Inoshuma Vatengesi, Ndege uye Cargo Numeri munaFebruary
DHMI Inozivisa Chikunguru Maera
Mukuru-Sen Hunger-Poverty Anozivisa Mwedzi weApril Mifananidzo
Mukuru-Sen Hunger-Urombo May May Anoshuma Numeri
Ushumiri hweTsika dzinozivisa Zviyero zvekuPinza uye Kutengeserana
DHMI Inoti Ndege Ndege, Passenger uye Cargo Traffic mugore re 2018
DHMI Inoti Ndeye Ndegondo, Yevatengesi uye Yekutengesa munaNovember
DHMI Inoti Ndezvikwata Ndege, Yevatengesi uye Yekutengesa kuMarch
DHMI Inoti '5 74 Mamiriyoni Evanhu Anofamba Mwedzi'